Hiob anoyi (1-17)
Ɔpɛ sɛ ɔka n’asɛm wɔ Onyankopɔn anim (1-7)
Ɔkae sɛ onhu Onyankopɔn (8, 9)
‘Mefaa ne kwan so, na mamman amfi ho’ (11)
23 Ɛnna Hiob kae sɛ: 2 “Ɛnnɛ nso, merenka m’ano ntom; mɛka m’asɛm.*+M’ahomegu nti, m’ahoɔden asa. 3 Minyae a, anka minim baabi a mehu Onyankopɔn!+ Anka mɛkɔ baabi a ɔte no.+ 4 Anka mede m’asɛm bɛto n’anim,Na mɛka nsɛm pii de akyerɛ sɛ m’asɛm yɛ dɛ; 5 Anka mɛhwɛ mmuae a ɔde bɛma me,Na matie nea ɔbɛka akyerɛ me. 6 Anka ɔde n’ahoɔden kɛse no ne me bɛko anaa? Daabi; anka nea ɛbɛyɛ biara obetie me.+ 7 Ɛhɔ na wobesiesie ɔtreneeni no asɛm wɔ Onyankopɔn anim.Anka me Temmufo no bebu me bem ama asɛm no atwa koraa. 8 Nanso mekɔ apuei a, onni hɔ;Mesan m’akyi nso a, minhu no. 9 Sɛ ɔreyɛ adwuma wɔ benkum so a, minhu no;Sɛ ɔman fa nifa a, ɛhɔ nso minhu no. 10 Nanso onim ɔkwan a menam so.+ Sɛ ɔsɔ me hwɛ wie a, me ho befi sɛ sika kɔkɔɔ amapa.+ 11 Otu a na matia mu;Mafa ne kwan so, na memman mfii ho.+ 12 Mentwee me ho mfii n’anom mmara ho. Mede n’anom asɛm+ ato me koma so asen nea ɛsɛ sɛ meyɛ mpo.* 13 Osi ne bo sɛ ɔbɛyɛ biribi a, hena na obetumi asiw no kwan?+ Nea ɔpɛ* sɛ ɔyɛ biara, ɔyɛ.+ 14 Efisɛ nea wahyɛ ato hɔ ama me nyinaa, ɔbɛyɛ,Na nneɛma a ɛtete saa de, ɔfa no kwa. 15 Ɛno nti na ne nti adwinnwen abɛtɔ me so yi;Midwen ne ho a, ɛma misuro no pii. 16 Onyankopɔn ama me koma atu,Na ade nyinaa so Tumfo no ama mabɔ hu. 17 Nanso esum mma menyɛɛ dinn,Na esum kabii a akata m’anim no mma menkaa m’ano ntoom.
^ Anaa “nea mereka ara na mereka; m’asɛm ayɛ atuatew.”
^ Anaa “nea wɔhwehwɛ fi me hɔ mpo.”
^ Anaa “Nea ne kra pɛ.”